Archive du 20180904
Didier Ratsiraka Hilaza loza
Hanao fanambrana ao amin’ny Carlton ny Amiraly Didier Ratsiraka rahampitso alarobia 5 septambra alina, raha ny loharanom-baovao azo.
CFM Zava-dehibe ny fananana etika politika…
Fampielezan-kevitra indray no hahoraka manerana ny tanàna afaka iray volana mahery. Hitety an`i Madagasikara ireo kandidà 36 amin`ny fifidianana filoham-pirenena mba handresy lahatra ny Malagasy mpifidy amin`izay paikadiny amin`ny fampandrosoana ny firenena.
Antoko Fanorolahy “Ny tantsaha no kandidanay”
Mitohy ny asa sosialy enti-manasoa ny mpiara-belona tanterahin’ny antoko Fanorolahy, tarihin’ny filoha nasionaliny Randrianary José.
Tambajotram-pokonolona Tafo Mihaavo « Tsy hanohana kandida izahay ! »
Namoaka fanambarana omaly ry zareo avy eo anivon’ny tambajotran’ny fokonolona mitantana ny harena voajanahary na ny Tafo Mihaavo fa tsy foto-kevitr’izy ireo ny hanohana kandida na antoko politika.
Ny Rado Rafalimanana Ny tanora no sarihiny
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy omaly ny birao fiasan-dry zareo avy eo anivon’ny Mahaolona izay tarihin’ny filohany, Ny Rado Rafalimanana etsy, Isoraka.
Manjakandriana Manantena azy hatrany
Tany Carion sy Manjakandriana ny kandida Marc Ravalomanana omaly nandalo sy nijery ny zava-mitranga eny ifotony. "Hamelona" no andraikitr'i Dada,
Kandidà sasany Maka toky any ivelany…
Mihazakazaka faramparany any andafy ireo kandida sasany amin`izao akaiky fifidianana izao. Maka toky any amin’ireo mpamatsy vola avy any ivelany angamba satria tsy mora ny miatrika fampielezan-kevitra ka mampanantena ny mpanome vola hanome vahana azy raha voafidy eo izy.
Ntsay Christian Nifindran’ny viriosy koa ?
Niteraka adihevitra goavana ny nahatongavan’ny praiminisitra Ntsay Christian teo amin’ny toerany taorian’ny didin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana nivoaka ny 25 mey 2018, nandidy ny handravana ny governemanta.
Fifidianana madio sy mangarahara Nanome 100.000 dolara i Korea Atsimo
Fety roa sosona no notanterahina tetsy amin’ny Hotely Carlton Anosy omaly alatsinainy 3 septambra dia ny fankalazana ny faha-4351 taonan’ny firenena Koreanina sy ny faha-25
Jean Omer Beriziky Nendahina avokoa ny sariny
“Tsy ananan-kavana ny fampiharana ny lalàna” ary “ny zanaka tiana tsy itsisiana rotsa-kazo”.
Fiatrehana fifidianana Manjavozavo ny tetibola
Mitentina 40 miliara Ariary ny tetibola natokan’ny fitondram-panjakana hanomanana ny fifidianana hitranga manomboka ny 7 novambra izao, raha ny voasoratra ao anatin’ny lalàna mifehy ny fitantanam-bola ho an’ny taona 2018.
Fako plastika Azo avadika ho akora indray
Nidina teny Ambatomirahavavy nitsidika ny orinasa ADONIS ny minisitry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina Guy Rivo Randrianarisoa sy ireo mpiara-miasa aminy omaly.
Rallye-RIM faha-39 Hitorajofo any Moramanga
Araka ny fangatahan’ny FSAM (Fédération du Sport Automobile de Madagascar) tamin’ny orinasa Fanalamanga dia any Moramanga sy ao anaty alan’ny Fanalamanga no hanatanterahana ny andiany faha-39 amin’ny RIM “Rallye International de Madagascar” taona 2018 amin’ny 20, 21 ary 22
Fifaninanana scooter Efa miandahy miambavy
Tontosa tamin’ny alahady 02 septambra 2018 teo, teny amin’ny SRK Imerintsiatosika, ny dingana faha-4 farany amin’ny fifaninanana mitondra moto scooter fiadiana ny “Trophées des Elites-Red Dog Scoot 2018” sokajy rehetra.
Basikety AT2B 10 taona isika’zao Hanao famarana avokoa ny Sénior AT2B lahy sy vavy
Tontosa teny amin’ny kianja Andraisoro ny lalao basikety 1/2-dalana telo amin’ny fiadiana ny fankalazana ny faha-10 taonan’ny At2b “Andraisoro Tia Basket Ball” araka ny vokatra :
Tsy mahita atao
« Tsy hita izay atao. Miambakavaka ny saina. Miferoferotra ny aina. Malotoloto ny maraina. Velon-taraina».
Bakalôrea 2018 Manome “cours” maimaimpoana ny TIM
Manome “cours” maimaimpoana ho an’ireo mpanala fanadinana bakalôrea ny antoko Tiako i Madagasikara na TIM ao amin’ny Boriborintany faha-6 eto Antananarivo Renivohitra.
Vitrine du Vakinankaratra Nisongadina hatrany ny orinasa TIKO
Fahombiazana ho an’ny orinasa Tiko AAA ny fandraisan’anjarany indray tamin’ny “Vitrine du Vakinankaratra”, andiany faha-21 notanterahina ny faran’ny herinandro teo iny.
Taom-baovao Malagasy Hankalazaina ao Fianarantsoa
Hiditra amin’ny andiany faharoa ankehitriny ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ho an-dry zareo avy eo anivon’ny fikambanana Malagasy Mampiray Firenena (MAMAFI) sy ny Komity Mikarakara Ny Taom-Baovao Malagasy (KMTM).
Tokony hanao “Jury BEPC” Nisy namono ilay madama
Ny tranony may vokatry ny “court-circuit”, izy maty novonoina. Rasoarilinina Marthe, mpampianatra ao amin’ny CEG Centre Morondava no niharan’ity loza mahatsiravina ity ny alin’ny alahady 2 septambra 2018.
Samy manana ny marika hanehoany ny maha izy azy izay daholo ireo mpanao politika goaikantitra sy nanana ny lazany teto Madagasikara.
Fampiroboroboana ny fikarohana Antoky ny fandrosoan’ny firenena
Nampahafantarina tetsy amin’ny efitranon’ny filohan’ny oniversite omaly alatsinainy 3 septambra ny fisian’ny Salon de la Recherche au service de l’économie et de l’emploi andiany fahefatra.
Fako eny amin’ny Hopitaly Azo ahodina ihany koa
I Madagasikara dia anisan’ny nandray anjara tamin’ny fifanarahana tany Stockholm niompana tamin’ny fiarovana ny fahasalamana sy ny tontolo iainana miainga amin’ny fampihenana ny fampiasana ny mercure.
Gidragidran’ny Toliara Sands Andry Rajoelina no fositra
Ny taona 2012 tamin’ny andron’ny tetezamita no nahazo alalana hitrandraka harena ankibon’ny tany eto amintsika ny orinasa Toliara Sands, mitrandraka fasimainty.